Imandarmedia.com.np: यी हुन् बिहे गर्नु अगाडि युवतीलाई सोध्नुपर्ने महत्वपुर्ण ५ प्रश्नहरु !
Lifestyle » यी हुन् बिहे गर्नु अगाडि युवतीलाई सोध्नुपर्ने महत्वपुर्ण ५ प्रश्नहरु !
यी हुन् बिहे गर्नु अगाडि युवतीलाई सोध्नुपर्ने महत्वपुर्ण ५ प्रश्नहरु !
परिबर्तनशिल समयसंगै आधुनिक समाजमा मागी विवाह भन्दा प्रेम बिबाह धेरै हुने गरेको पाइन्छ । तर यदि तपाईहरु मागी विवाह गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने केही महत्वपुर्ण प्रश्नहरु युवतीलाई सोध्नुहोस् ।
एक अर्काको आनीबानी थाहा पाउन वर्षौंसम्म लाग्न सक्छ । तर केही प्रश्न यस्ता छन् जुन प्रश्नबाट तपाई क्षण भर मै हुनेवाला जीवनसाथीको सम्पूर्ण आनीबानी थाहा पाउन सक्नुहुन्छ ।
३- आर्थिक मामलामा उनको धारणा के हो त्यो पनि बुझ्नु होस् । तपाईको जिन्दगी सफल पार्नका लागि आर्थिक चिजको भूमिका पहिलो र महत्वपूर्ण हुने गर्छ । तर याद गर्नुहोस् मनी माइन्डेट युवति छ भने पनि तपाईको जीवन सफल नहुन सक्छ ।